AMA Warshad Alaab Ah | Shiinaha AMA Soosaarayaasha iyo Alaabada
SMart-L40plus Nalalka Qalliinka LED
Naqshadeynta naqshadeynta muraayadaha indhaha, 'SMart-L' waxay leedahay saameyn aan mugdi lahayn oo hadh la'aan ah waxayna buuxisaa baahiyaha qalliinnada badankood Jidhka iftiinka oo dhami waa iftiin iyo boosas si sax ah.
SMart-L35plus Nalalka Qalliinka
Nalalka Qalliinka ee loo yaqaan 'SL-P40 LED'
Iyada oo la adeegsanayo nashqadeynta ubaxyada ubaxyada, SL-P40, SL-P30 nalalka qalliinka waxay ka jawaabi karaan inta badan qalliinnada loogu baahan yahay muuqaalkeeda waara oo caqli badan.
Nalalka Qalliinka ee loo yaqaan 'SL-P30 LED'
Shaxda XHT-D Korontada-Haydarooliga
Miiska hawlgalka oo dhammeystiran, oo leh qalabka korontada lagu riixo ee korontada ku shaqeeya, ayaa qancin kara hay'adaha caafimaadka ee ku saabsan saami-karka, sawaxanka hooseeya, qunyar socodka iyo hawlgalka joogtada ah, isku halaynta iyo xasilloonida wanaagsan.
Shaxda Howlgalka Korontada ee XHT-B
Jadwalka Hawlgalka-H7000 ee Korantada-Haydarooliga
Iyada oo la adeegsanayo naqshad shan qaybood oo qadiimi ah, STable-H7000 ayaa ka jawaabi karta baahiyaha qalliinnada badankood. Waa badeecad saamiga qiimo-ku-ool ah oo ku jirta suuqa miiska hawlgalka.